Dhammaan Bilawga Cusub ma U Baahan Tahay Wax Ka Beddel Mashiinka Raadinta?
Raadinta mashiinka raadinta maarreyn waa qalab weyn oo bixiya bilowga hore macluumaadkii ugu muhiimsanaa ee ay u baahan yihiin si ay u helaan wadada koowaad ee heerka SEO. Nasiib darro, ma ahan dhammaan waxbarashooyinka SEO-ga oo la siman yahay. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in aad awood u leedahay in aad kala garato hogaamiyayaasha SEO-yada kuwaas oo kaa faa'iideysan doona adiga iyo kuwa kuwaas oo kaliya kaa dhumi doona waqtigaaga.
Ha lumin saacado badan sida joornaalada SEO ugu badan. Maanta, khabiirada Semtalku waxay ku siin doonaan aragti gaaban oo ku saabsan sida tababarka hufnaanta raadinta tayada leh ay u ekaan karto.
Si fudud u sharraxaad sida Google uga shaqeeyo
Marka ay timaado barashada SEO, waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa dib u eegto sida Google loo bilaabay iyo sida maanta waa isbedel. Marka aad sameysid saldhigga aasaasiga ah, waxaa kuu fududaan lahayd inaad fahamto sida Google ee boggaga internetka u yahay.
Ma jirto diidmo in Google waa shirkad aad u fiican. Si kastaba ha ahaatee, xitaa inkastoo qaabka loo yaqaan 'algorithms' ka waxay yihiin kuwo la yaab leh, ma jirto baahi loo qabo in laga fogaado taariikhda SEO, gaar ahaan haddii aad tahay qof SEO ah.
Markaad bilowdo sahaminta aduunka SEO, waxaad u baahan tahay inaad u cadeyso Google waxa ay website-kiisu ku saabsan tahay. Ku kalsoonow Google in khayraadkaagu uu yahay mid caan ah oo u qalma darajada koowaad ee bogga. Si aad u gaarto hadafkan, waa inaad raacdaa istaraatijiyad farsamo oo casri ah oo caadi ahaan lagu bixiyo barashada tayada SEO.
Sida loo sameeyo Google Love Your Site
Inkastoo Google uu yahay mid caqli badan, weli waxay ubaahantahay caawinaad dheeraad ah. Mashiinnada ugu weyn ee raadinta ayaa si joogto ah u wanaajiya tiknoolajigooda si ay u tarxiilaan webka si qotodheer iyo soo celiyaan natiijooyinka qiimaha badan ee raadiyaha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xad u gaar ah sida Google, Bing, Yahoo iyo makiinadaha kale ee raadinta ku shaqeyn kara. Halka SEO-ga saxda ah ay kuu keeni karto boqolaal booqasho iyo fiiro dheeraad ah, dhaqdhaqaaqa khaldan ayaa qarin kara khayraadkii aad ku qadeen natiijooyinka raadinta ee muuqaalkeedu uu ku dhow yahay eber.
Intaa waxaa dheer in samaynta content ay rafcaan u tahay matoorada raadinta, SEO sidoo kale waxay ka caawisaa kordhinta darajooyinka si content in la meeleeyay meesha meesha isticmaali doonaa si kaamil ah u helaan. Sababtoo ah internetka ayaa sii kordhaya tartanka, shirkadaha kuwa sameeya SEO waxay leeyihiin fursad wanaagsan oo lagu ogaanayo Google.
Miyuu yahay Tababarka Raadinta Mashiinka Mashiinka Waxbarashada Muhiim u ah SEO?
Dunida SEO ma aha mid aad u adag sida dadku u arkaan. Waxaad si sahlan u fahmi kartaa aasaaska dhaqanka noocan oo kale ah wax ka yar hal bil. Xitaa qadar yar oo aqoon ah ayaa farqi weyn u noqon kara ganacsigaaga.
Sanadkii 2017, waxbarashada SEO-ga oo lacag la'aan ah ayaa si ballaaran loo heli karaa internetka. Waxaad ku heli kartaa arrin ilbiriqsiyo badan oo ku saabsan farsamooyinka raadinta mashiinka raadinta iyo hagayaal tallaabo tallaabo ah oo aan xitaa ka tegin kursigaaga. Ku dheji buug yar, oo aad si fiican u socotid si aad u noqotid khabiir SEO ah.
Sida aad u aragto, waxaa wanaagsan in la helo aqoon aasaasi ah oo ku saabsan fikradaha muhiimka ah ee SEO, iyo barashada farsamaynta raadinta macaamiisha ayaa kaa caawin kara inaad barato fikradahaas Source .